FOMBA AHOANA NO HANALANA MOZIKA AN-TSERASERA? - FOR BEGINNERS - 2019
Ahoana no fomba hanalana mozika an-tserasera - 3 fomba mora
Ao amin'ny torolàlana etsy ambany - ny fomba tsara indrindra hanesorana mozika an-tserasera sy maimaim-poana amin'ny fampiasana serivisy tsotra sy mahazatra amin'ny teny Rosiana, izay natao manokana ho an'ireo tanjona ireo (mazava ho azy fa azo atao ny mozika). Jereo koa: Ahoana no fijerin'ny lahatsary ety anaty aterineto sy amin'ny programa.
Na inona na inona antony tokony hanasanao hira na feo hafa: Mba hamoronana tononkira (ho an'ny andro Android, iPhone na Windows Phone), raha te hamonjy sombin-drakitra tianao (na hamafana azy), ny tolotra an-tserasera eto ambany dia mety ho ampy: efa nanandrana aho Mifidiana azy ireo amin'ny alàlan'ny famoahana ny fiteny Rosiana, lisitry ny format malalaka ho an'ny raki-peo ary mety ho an'ny mpampiasa vaovao.
Amin'ny toe-javatra sasany dia tsara kokoa ny mampiasa programa manokana natao ho an'ity tanjona ity, fa raha mamolavola hira sy feo hafa dia tsy zavatra ataonao tsy tapaka, ny tonian'ny aterineto dia ampy, ankoatr'izay, tsy voatery hametraka na inona na inona ianao.
Audio Cutter Pro (aka Audio Audio Cutter, Mp3Cut)
Crop audio amin'ny Ringtosh
Feon-kira mandeha amin'ny Internet ao amin'ny Audiorez
Audio Cutter Pro (Audio Audio Cutter) - fomba tsotra, haingana sy mahomby hanalana mozika
Azo inoana fa ilainao ny manapaka ilay hira ety anaty aterineto, mila mamorona tononkira ianao ary mamonjy azy amin'ny format marina (ohatra, ho an'ny finday Android na iPhone).
Mora ny fomba, ny tranonkala dia tsy mavesatra loatra amin'ny dokam-barotra, amin'ny teny Rosiana ary miasa tsara. Ny ilainao dia ny mandeha any amin'ny serivisy amin'ny aterineto Rosiana Audio Cutter Pro, ny Internet Audio Cutter ary manaraka ireo dingana tsotra ireo.
Kitiho ny bokotra misokatra "Open file" ary mifidiana ny rakitra ao amin'ny solosainao. Efa misy ny format manan-tompo lehibe indrindra, toy ny MP3, WMA, WAV ary ny hafa (nampiasa M4A aho ho an'ny fanandramana, ary misy 300 formats). Ankoatr'izay, azonao atao ny mamaritra ny rakitra video, amin'ity tranga ity, ny feo dia azo alaina avy amin'izany, ary efa afaka manapaka izany ianao. Azonao atao ihany koa ny mandefa audio tsy avy amin'ny solosaina, fa avy amin'ny fitoeran'ny rahona na amin'ny alalan'ny rohy ao amin'ny Internet.
Rehefa tapaka ilay rakitra dia ho hitanao ny mozika amin'ny fomba fijerin'ny sary. Mba hanatanterahana ny famafazana fanangonana, ampiasao marika roa etsy ambany, mba hilalao ilay segment ny "Space". Azonao atao ihany koa ny mifidy izay endrika tianao hovonjena ilay segment - MP3, ringtone ho an'ny iPhone, ary amin'ny fanindriana ny bokotra "More" - AMR, WAV ary AAC. Ao an-tampony ihany koa dia misy safidy hiditra tsara ao amin'ny fananganana (mihamitombo ny feo mihisatra avy amin'ny 0 ka hatramin'ny mahazatra) sy ny farany tsy misy. Rehefa vita ny fanovana dia tsindrio ny Trim.
Izany rehetra izany, angamba ny serivisy amin'ny aterineto dia haka fotoana kely hanalana ny mozika (arakaraka ny haben'ny rakitra sy ny famolavolana ny format), aorian'izany dia hahita hafatra milaza fa vita ny famafana ary ny rohy Download. Tsindrio izany mba hamonjena ilay rakitra amin'ny ordinateranao.
Izany rehetra izany dia ny fampiasana ny //audio-cutter.com/ru/ (na //www.mp3cut.ru/). Raha ny hevitro, tena, tena tsotra, ho an'ny fepetra ilaina sy tsy misy fetrany, ary mieritreritra aho fa na dia ny mpampiasa vaovao aza dia tokony hiatrika ny fampiasana azy.
Alefaso amin'ny Internet amin'ny Ringtosh
Asa lehibe iray hafa an-tserasera izay ahafahanao manapaka mora foana mozika na feo hafa - Ringtosh. Mahagaga fa tamin'ny fotoana nanoratana ity fitaovana ity dia tsy hoe maimaim-poana fotsiny, fa koa tsy misy dokam-barotra.
Ny fampiasana ny serivisy dia mitovitovy amin'ireo dingana mitovy amin'ny dikan-teny teo aloha:
Tsindrio ny bokotra "Download" na tadiavo ny raki-doha amin'ny tapa-damba amin'ny teny hoe "Ampidino ny rakitra eto" (eny, afaka miara-miasa amin'ny antontan-taratasy maromaro ianao, na dia tsy afaka mampifandray azy ireo aza ianao, fa mbola tsara kokoa noho ny maimaim-poana amin'ny fotoana iray).
Ampidiro ireo marika maitso hatrany am-piandohana sy ny faran'ny ampahany amin'ilay horonan-tsarin'ilay hira (azonao atao ihany koa ny mametraka fotoana ao anatin'ny segondra amin'ny tanana), amin'ny fanindriana ny bokotra play ka afaka mihaino ny segona voafantina ianao. Raha ilaina dia manova ny volan'ny feo.
Safidio ny format mba hamonjena ny andalana - MP3 na M4R (ity farany dia mety amin'ny ringtone iPhone) ary tsindrio ny bokotra "Crop". Vantany vao vita ny fanoratana feo dia manomboka ny fandefasana ny rakitra noforonina.
Ny tranonkala ofisialin'ny serivisy Ringtosh ho an'ny mozika mamim-bary ary mamorona ringtones - //ringtosha.ru/ (mazava ho azy, tanteraka amin'ny teny Rosiana).
Fomba hafa hanapahana ny ampahany amin'ny hira iray amin'ny aterineto (audiorez.ru)
Ary ny tranonkala farany izay ahafahanao manatontosa mora foana ny asan'ny mozika an-tserasera. Amin'ity tranga ity dia ampiasaina amin'io (ny navigateur anao io sehatr'asa io, izany hoe ny Google Chrome na ny tranokala hafa mifototra amin'ny Chromium.) Nanandrana izany tao amin'ny Microsoft Edge aho.
Tsindrio ny "Upload File", manorata ny lalana mankany amin'ny rakitra audio ary miandry ny download.
Ampiasao ireo marika maitso telo-polo eo an-tampony mba hampisehoana ny fiandohana sy ny fiafaran'ilay tapakila tianao avy amin'ny hira na feo hafa. Amin'ity tranga ity, afaka mampiasa ny bokotra ianao mba hijerena ilay sombina.
Click Trim. Ny fizarana fizarana dia ho azo ampiasaina avy hatrany raha hihaino ao amin'ny fikandran'ny editor.
Mifidiana ny format mba hamonjena ny rakitra - MP3 (raha toa ka tapaka ny mihaino amin'ny ordinateranao na ampiasaina ho toy ny ringtone amin'ny Android na M4R raha toa ka mila fehezan-teny ho an'ny iPhone ianao).
Tsindrio ny "Download" mba haka ilay ampahany noforonina ao amin'ilay hira.
Amin'ny ankapobeny, afaka manoro ity tolotra antserasera ity isika mba hampiasaina. Ny tranonkala ofisialy, araka ny voatondro ao amin'ny subtitle - //audiorez.ru/
Angamba mety ho vitako izany. Azo atao ny manoratra lahatsoratra toy ny "fomba 100 hanesorana mozika an-tserasera", saingy ny tena zava-misy dia ny fametrahana ny fepetra mahazatra ho an'ny famoronana pôrtôphônes sy ny fihenan'ny ampahany amin'ny hiran'ny iray hafa (niezaka ny mifidy ny hafa). Ankoatr'izany, tranonkala maro no mampiasa fitaovana mitovy amin'izany toy ny sisa (izany hoe ny ampahany miasa amin'izy ireo dia mitovy ihany, ary kely fotsiny ny endrika), toy ny amin'ny ohatra amin'ny Audio Cutter Pro sy Online Audio Cutter, raha ny marina, mamerina ny tsirairay.
Manantena aho fa ho ampy ny fomba ambaranao etsy ambony. Ary raha tsy izany, dia afaka manandrana safidy hafa ianao - soundation.com - mpamoaka mozika maimaim-poana, manana mpilalao mozika matihanina manana ny asany (ilaina ny fisoratana anarana). Na dia azo atao aza fa raha tsy mifanaraka aminao ny làlana maimaimpoana maimaim-poana amin'ny aterineto na toa tsy dia hita loatra dia tokony handinika ny fandaharan'asa momba izany ianao (izay matetika no mahomby kokoa noho ny tonian'ny aterineto).